I have just received this message from my genuine internal source working at Oromia Education Bureau. | Kichuu
Posted on November 2, 2018 by kichuu_admin
I have just received this message from my genuine internal source working at Oromia Education Bureau. Sharing this information may help participants to know beforehand and make necessary preparation to avoid the so called “Education Roadmap”.
“Biiroon Barnoota Oromiyaa warra biiroo keessaa deemanii “education roadmap” jeedhaniif deebi keenuuf boru Adaamaatti walga’ii hatattamaa waameera.
Tarii mariin kaleessa OBN hayyootaa Oromoo wajjin waa’ee “education roadmap” irratti godhe suun isaan naasiseera ta’a. “Hinbarii’uu jettee hudaan manattii haddee” jedha Oromoon yammuu mammaaku. Warri walga’ii kanarratti hirmaattan dhugaa jiru kan dhumaa itti himaa. Warra Afaan Oromoo qancarsuuf deemaniif murti keessan kan dhumaa jala muraati itti himaa.”
Ethiopian News: OBN ODUU FI HAAYYUU OROMO Nov,,1//2018
ONN:ABOn biyyatti galee torbaan lama keeysatti duula irratti banuun maalif barbaachise? Dr Onnee , Obbo Ahmed Sayyo fi Obbo Ibraahim Jermanee.sadaasa.2/2018
Agartuu Qeerroo tibbanaa (Xuurii qabsoo)
Utuu Dr. Abiyyi Ahemad aangoo biyyattii hinqabanne ta’ee OPDO’n maal gochuuf turan?
Dr. Abiyyi Ahemad maal keessa jiruu?
Biyyattiin garamitti adeemaa jirti?
OPDO fi Dr. Abiyyi maaltu wal dhabsiise?
Xuuriin Oromoo OPDO balleessuu jira.
Eessarra kaana? Dubbin keenya dhumee xumura argachuuf waan jiruuf dhiphinni, gooliif hammacoon hammaate. Hammacoon kun turtii muraasaaf kan deddeemtudha. Adeemsuma dhala namaatu akkana. Gaafa namaa darbuu ka’u rakkinni huutee morma nama qabdi. Har’a nuti Oromoon har’a gaddaaf gadadoo keessuummeessaa cinqii guddoo keessa jirra. Rakkinni har’a akka biyya keenya Oromiyaatti nurra gahaa jira. Rakkinni kun ammoo biyya ollaa keenyaa Xoophiyaadhaan nurratti deddeemaa jira. Akeekni rakkina keenya har’aa nagaa borii, gammachuu iftaanii, jiruu gmachuu egeeree biyya keenya Oromiyaa fi Oromoo akka ta’e beekna. Har’a rakkachuun keenya waan nuu darbuuf ka’eefi jennee fudhanna. Garbummaan har’a nu mudduun waan bor Bilisoomnuuf akka ta’e hubanna. Tibba kana qaamuma kaleessa nu nyataa turetu isa dhumaa irreesaa nutti bobbaasaa jira. Humni Oromoo humna diinaan tokko ta’uu baatuus waan jabaan nuti qabnuuf ittin mohataa jirru haqaaf dhugaa akka ta’e cimseen beeka. Humna keenya kana kan ta’e haqni keenya baraan jiraataadha jenna.
Agartuu Qeerroo har’aa Xuurii qabsoo jenne. Xuurii jechuun namaaf oolanii namumti oolaniif sun gaafa nama miidhu, oolee bulee waaqni gatiisaa gaafa deebisuuf xuurii ebeluutu qabe jenna. Xuuriin Oromoo ilmaan diinaa mara nii qaba. Maaliif laata gaaffii jedhuuf Oromoo qotee nyaachise, tiksee fooniif cooma mursiise, jiruu gaarii akkanni jiraatuuf biyyasaa keessatti ofitti qabee bulchate. Qaamuma inni Coomaaf booka itti qabaa turetu ilmasaa ajjeesaa bahe. Qaamuma ilmasaa ajjeesaa bahetu har’ammoo gaachana Oromoo qabeenya Oromoo guddaaf olaanaa WBO adamsuuf bobbaarra jira. Harki keenya oolee bulee diina keenya akka qabu beekna. Kanas ta’e sana abbaan waan facaase haammachuu jira. Oromoon waan oole nama kamiif waan godheef nama sana biraa galata dhabus waaqa biraa argachuu jira. Haqni kana.
OPDO’n maaliif fokkarti warri Nafxanyaa jennaan inni kibbaa qaama jabaa ABO qabdi jedhe. OPDO/PDO’n ABO bosona keessatti abdataa TPLF tti fokkaraa turte. Gaafa TPLF itti fakkaruu barbaaddu “An yoo diddanis ABO qaba isattin bada, isattin baqadha! Isattin himadha!” Jechaa ittiin diina doorsifataa turan. Sun gaariidha waanuma godhamuu qabudha akkuma ABO dhaan halagaa naasifti halagaa doorsiftu utuu ABO deggartee waliin hojjetteemmoo yaa Warqii! Jedha Agartuu Qeerroo.
Haqni kana. OPDO’n ABO qabattee TPLF waraanuuf akeeka qabattee turte. Dubbiin kun keessoodhaan dubbatamaa ture. Yoo TPLF aangoo nuu laachuu didde ABO isa waraana qabu itti fidnee rukuchiifna. Yoommoo aangoo nuu laatan baraaraman jechuu ture. Gulantaan qabxii OPDO yerosii lama ture, ka jalqabaa karaa haqa qabeessaan akka aangoon laatamuuf gaafachuu. Ka lammataa karaa waraanaa ABO dabalatanii hanga warra aangoorra jiran funaannee fixnutti hojjenna. Kana gahuuf ammoo humna gahaa nuti abdannu WBO qofa. Kanaaf ABO waliin karaa keessoo haasa’uu wayya. Kun ajandaa OPDO utuu Abiyyi hinmuudamin ture.
Oddeessi kun akkuma jirutti ta’ee akka carraas ta’ee Dr. Abiyyi muummee Ministeeraa ta’ee. Erga Dr. Abiyyi Muummee Ministeeraa ta’ee as ammoo akkuma biyyattiitti nuti qofti jiraachuu qabna, dhaabolee biraan Oromoo hinfayyadan ana dhugaan ana karaan oduu jedhu ka jalqabes OPDO dha.
Haala jireenya Dr. Abiyyi ammaa hanga tokko Agartuu Qeerroo qorataa turte. Nama nagaa ta’uusaaf hanga tokko haqa nama jaallatu garuu nama nama akkasaa dhugaa beekuuf dhugaaf hojjetu dhabee rakkatu ta’uusaa himama. Dr. Abiyyi yeroo mara nama “nuti qurxummii galanaa fakkaachuun qurxummii uummata keessaati, qurxummiin uummata keessaa uummataan ala hinjiraatu. Fedhii uummataa guutna!” Yaada jedhu qabatee ka’e. Yaadni kun OPDO cimsee aarse. Akka paartiitti OPDO/PDO’n gaafa Dr. Abiyyi ABO’n biyya galee karaa nagaa akka qabsaa’uu muteessu. OPDO yaada gurguddaa kaasaniif. “Miseensa keenya akkam goona egaa? Miseensa gadii caasaa godinaa hanga aanaa hanga fedaraalaa qabnuuf ABO balaadha” yaada jedhu kaasaniif. Kana hoggana OPDO dubbate.
Dubbii kana furuuf tarkaanfii jabaa fudhanna jechuun tarkaanfii fayyaaleessa “jaalala” mata duree jedhuun Dr. Abiyyi akka hojjetamuu qabu dubbate. Dubbiin dhiifamaas ajandaa jiiraachisa OPDO warra kaleessa lafeef foonkeenya nyaateef eegicha lubbuu gochuuf godhame. Uummatnis waan hunda ta’uu baatus dhiifama gochuuf fuula laate. Uummatni gaafa OPDO dhaaf hojiishee kaleessaa dhiisuuf fuula laatu waan guddaa dhalate. Rakkinni kunis gaafa furamuuf akeeku OPDO gowwomse. Akkamitti? OPDO diina akka turte of dagachuu jalqabe. Of dagatuurraa kan qabsoo kana asiin gahe ana jechuutuu eegale. Yaadni OPDO’n ana abbaan qabsoo jedhu kun dabalataan Qeerroo fi uummata Oromoo aarse.
Amma waan hundi gaafa babal’atu OPDO’n waraana banuu murteessite. Waraana OPDO’n labsite kanaan furmaatni akka hinjirre Dr. Abiyyi jala muree dubbateera oduun jedhus jira. Kun ammoo Dr. Abiyyi akkanni OPDO dhaan balaaleffatamu taasise. Dr. Abiyyi ABO nutti fide ofiisaafuu ABO dha jedhees kan duula miidiyaan irratti hololchiisuu kan bane OPDO dha. Kun hundi gaafa ta’u Dr. Abiyyi nagaa dhabe. OPDO’n gaaraa hanga godaatti Dr. Abiyyi balaaleffatu. Har’a Dr. Abiyyi nama kiyyoo keessaa ta’eera. Waraannis ajajnis isaan alatti waan raawwataa jiru fakkaata. Tasgabbiin biyyaa gaafa dhabamaa deemu “ani biyya gadlakkisuun qaba, ykn aangoo gadlakkisuun qaba!” Jedhee murteesse. Fuulduratti murtiin isaanii akkam ta’a laata? Hinbeeknu
Biyyattiin akka Dr. Abiyyi fedhutti filannoo haqaa argattee mootummaa feetuun akka bultu ta’uu ka dubbatan jiru. Filannoon akka filannoo haqaa fi filannoo nagaa hintaaneef OPDO hojii jeequmsaa jalqabde. Hojii jeequmsaa kana fedhii lama irraa qabaatteeti. Ka jalqabaa diinaa wajjin Dr. Abiyyi akka aangootti lakkisuuf, ka lammataa ABO’n akka filannoo miilanaatti dhiyaatee karaa nagaa dorgommiitti hindhiyaanneef yaaddee goote. Kun nii milkaa’aafii laata? Waaqa beeka
Dr. Abiyyii fi OPDO wanti wal dhabsiise haqaan hojjennaaf haqaan hinojjennu ka jedhudha. Kan haqaan hojjetuu barbaadu Dr. Abiyyi akka dubbatamu taanan, sana harkaa rukutuuf kan hojjetummoo OPDO/PDO ta’uuttin beeka. Dabalataan jechi Dr. Abiyyi “uummatni waan filateen haa bulu, dhaaba barbaade haa filatu!” Jedhu mara isaanii aarseera. Isaan dullaan uummata bituu barbaadu akkuma kaleessaa, dabalataan Dr. Kabajaa Lammaa keessa miirri wayii kan “hojii siyyaasaa an hojjedheen Dr. Abiyyi muudame!” Jedhu akka jiru dubbatama.
ESAT DC Daily News Fri 2 Nov 2018